Madaxweyne Siilanyo Oo Magacaabis Sameeyey |
Madaxweyne Siilanyo Oo Magacaabis Sameeyey
Hargeisa(GNN):-Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Silanyo:
• Isagoo gudanaya Xilka iyo Masuuliyadda Distooriga ah ee Xukuumadiisa ka saaran ilaalinta iyo la socodka qiimaha Shilinka Somaliland oo ah lacagta Sharciga ah ee uu Qarankani leeyahay;
• Isagoo ay ka go’antahay in si rasmi ah loola dagaalamo Qiima-dhaca Shilinka Somaliland;
• Isagoo gudanaya masuuliyadda Xukuumadiisa ka saaran ilaalinta ascaarta suuqyada iyo la dagaallanka Sicir-bararka;
• Isagoo ogsoon saamaynta taban (xag dhaqaale, xag bulsho, xag siyaasadeed iyo xag naba-gelyo) ee ay Qaranka ku yeelan karaan haddii aan si deg-deg ah wax looga qaban Xaaladahan is-barkan ee Qiima-dhaca Shilinka iyo Sicir-bararka ba’an ee dalka ka jira;
1. Isticmaal la’aanta lacagta qaranku waa dembi. Sidaa darteed, waa waajib Qaran in dhammaan muwaadiniinta iyo shisheeyaha ku nool Jamhuuriyadda Somaliland, ay si rasmi ah u adeegsadaan, waxna ku iibiyaan waxna ku iibsadaan lacagta dalka. Cid kasta oo ka hortimaadda dhaqan-galkeeda iyo isticmaalkeeda, waxaa laga qaadayaa tallaabo adag oo sharciga waafaqsan.
Ugu dambayn, Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Silanyo wuxuu si adag u faray dhammaan masuuliinta ay warqaddani sida tooska ah iyo sida dadbanba ugu socoto, in ay meelmariyaan, fuliyaanna go’aamadan ka soo baxay Golaha Wasiirrada JSL, isla markaana ay sharciga la tiigsadaan cid kasta oo ka hor-timaadda dhagan-galkooda.